Ebɛn Kwan Do Na Bible No Botum Aboa Me?​—Hwehwɛ Wo Bible No Mu | Mbabun Bisa Dɛ
Mbabun Bisa Dɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur America Mmum Kasa Amharic Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Ecuador Mmum Kasa English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish French Ga (Nkran Kasa) Georgian German German Mmum Kasa Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lunda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Maya Mfantse Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peru Mmum Kasa Pidgin (West Africa) Polish Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russia Mmum Kasa Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Udmurt Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zulu
Ebɛn Kwan Do Na Bible No Botum Aboa Me?​—Ɔfã 1: Hwehwɛ Wo Bible No Mu
“Mayɛ dza mubotum biara dɛ nkyɛ mebɛkenkan Bible no, naaso sɛ mohwɛ Bible no ne kɛse a, nna m’abaw mu ebu!”​—Briana, 15.
Ana dɛm na etse nka? Nsɛm ahorow a odzidzi do yi bɔboa wo!
Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ ekenkan Bible no?
Ebɛn kwan na ɔsɛ dɛ mefa do kenkan Bible no?
Dza w’etsipɛmfo kã
Ana w’enyi nngye Bible akenkan ho? Sɛ dɛm na etse nka a, ka w’akoma to wo yamu. Ntseasee wɔ mu. Bi a w’adwen yɛ wo dɛ nwoma ahorow a ɔwɔ Bible mu no dɔɔ sõ, na mfonyin biara nnyi mu ntsi ne kenkan rennyɛ dɛw, na TV nye video ahorow ne hwɛ yɛ enyigye koraa mpo kyɛn Bible akenkan!
Naaso susu ho hwɛ o: Sɛ enam na sɛ ekɔto dɛ adaka kɛse bi a wɔdze egudze egu mu si hɔ a, ana eremmpɛ dɛ ihu egudze kor a ɔwɔ mu no?
Bible no tse dɛ dɛm adaka a wɔdze egudze egu mu no. Sɛ ekenkan a, ibohu nyansa na ɔbɔboa wo ma
eesisi gyinae pa
enye w’awofo aatsena kama
eenya anyɛnkofo papa
eetum egyina dadwen ahorow ano
Wɔkyerɛɛw Bible no akyɛr. Naaso yebotum dze no mu nsɛm no abɔ hɛn bra ndɛ. Ebɛnadze ntsi na yɛrekã dɛm? Osiandɛ “kyerɛwsɛm biara fi [Nyankopɔn] ahom mu.” (2 Timothy 3:​16) Iyi kyerɛ dɛ, yebotum dze hɛnho ato afotu a ɔwɔ Bible mu no do osiandɛ ofi Nyankopɔn hɔ.
Bible no tse dɛ adaka a wɔdze egudze egu mu mã. No mu nsɛm bɔboa wo ma eehu nyansa
Ɔkwan kor nye dɛ ebɛkenkan efi n’ahyɛse ekesi n’ewiei. Iyi bɛma ehu dza Bible no kã ho asɛm. Ibotum afa akwan ahorow pii do akenkan Bible no. Susu nhwɛdo ebien yi ho:
Ibotum akenkan nwoma 66 a ɔwɔ Bible no mu no nyinara. Ibotum akenkan no ndzidzido ndzidzido, fi Genesis dze ekesi Nyikyerɛ.a
Ibotum so akenkan no ndzidzido ndzidzido dɛ mbrɛ nsɛm ahorow ɔwɔ mu no sisii no.
Nyansahyɛ: Hwɛ Appendix A7 a ɔwɔ New World Translation no mu no, na ibohu mbrɛ Jesus n’asetsena mu nsɛm sisii ndzidzido ndzidzido wɔ asaase yi do.
Ɔkwan a otsĩa ebien a ibotum afa do akenkan Bible no nye dɛ, ebɛkenkan asɛm bi a osii a ɔfa nsɛndzendzen bi a irihyia ho. Dɛ nhwɛdo no:
Ana epɛ dɛ inya anyɛnkofo a ibotum dze woho ato hɔn do anaa? Kenkan Jonathan na David hɔn ho nsɛm a ɔwɔ Bible no mu no. (1 Samuel, etsir 18-​20) Afei hwɛ esuadze a ibotum enya efi hɔn nsɛm no mu a ibotum dze abɔ wo bra. Dwumadzi krataa a wɔato dzin “How to Find Loyal Friends” [Mbrɛ Ibotum Enya Anyɛnkofo A Ibotum Dze Wo Ho Ato Hɔn Do] no botum aboa wo ma eenya dɛm esuadze no.
Ana epɛ dɛ ehyɛ wo bo a esi dɛ ebɔkõ etsia nsɔhwɛ no mu dzen anaa? Dɛm dze a, kenkan mbrɛ Joseph kõe tsiaa nsɔhwɛ no ho adze. (Genesis, tsir 39) Afei hwɛ esuadze a ibotum enya efi n’asɛm no mu a ibotum dze abɔ wo bra. Dwumadzi nkrataa a wɔato dzin “How to Resist Temptation . . . Joseph​—Part 1” (Mbrɛ Ibesi Akõ Tsia Nsɔhwɛ​—Joseph Ɔfã 1) na “Falsely Accused! Joseph​—Part 2” (Wɔbɔɔ No Ator Sombo Bi​—Joseph Ɔfã 2) botum aboa wo ma eenya dɛm esuadze no.
Ana epɛ dɛ ihu mbrɛ mpaabɔ botum aboa wo anaa? Kenkan Nehemiah no suahu ho asɛm. (Nehemiah, tsir 2) Afei hwɛ esuadze a ibotum enya efi n’asɛm no mu a ibotum dze abɔ wo bra. Dwumadzi krataa a wɔato dzin “God Answered His Prayer” (Nyankopɔn Tsiee Ne Mpaabɔ) botum aboa wo ma eenya dɛm esuadze no.
Nyansahyɛ: Sɛ erekenkan Bible no a, hwɛ hu dɛ beebi a ewɔ no ayɛ dzinn, mbrɛ ɔbɛyɛ a ibotum dze w’adwen nyina esi dza erekenkan no do.
Ɔkwan a otsĩa ebiasa a ibotum afa do akenkan Bible no nye dɛ, ebɛfa Bible mu asɛm bi anaa Ndwom nwoma no na akenkan. Afei sɛ iwie a, hwɛ mbrɛ dza ekenkanee no fa woho. Ekenkan wie a, bisa woho dɛ:
Ebɛnadze ntsi na Jehovah maa wɔkyerɛɛw asɛm yi wɔ Bible no mu?
Ebɛnadze na iyi ma muhu fa Jehovah anaa ɔkwan a ɔfa do yɛ n’adze no ho?
Mebɛyɛ dɛn dze asɛm yi abɔ me bra?
Nyansahyɛ: New World Translation (Study Edition) no botum aboa wo ma eenya video ahorow, map nye ndzɛmba afofor beberee a ɔbɔboa wo ma eenya dza erekenkan no do mfaso.
“Ɔtɔ da a, mepaw Bible mu nwoma a m’enyi gye ho nna makenkan. Iyi boa me papaapa ma mutum du mo botae a medze esi m’enyiwa do dɛ mebɛkenkan Bible no dabaa no ho. Dɛ nhwɛdo no, m’enyi gye Mbɛbusɛm nwoma no ho. Nyansasɛm ahyɛ mu mã, na iyi hyɛ mo nkuran papaapa.”​—Chloe.
“Mobɔ mbɔdzen dɛ mebɛkenkan Ndwom nwoma no mu nsɛm kor anaa ebien bi ansaana maakɛda. Hɔn a wɔkyerɛɛw Ndwom nwoma no, nna wɔwɔ atsenka tse dɛ hɛnara. Ansaana da biara bɔkɔ n’ewiei no, ohia dɛ mususu biribi ɔhyɛ nkuran ho. Ndwom nwoma no a mekenkan no hyɛ mo nkuran ma muhu dɛ Jehovah Nyankopɔn na ɔma minya awerɛkyekyer ankasa.”​—Stefan.
Nsɛm Afofor A Ɔfa Ho
Mbabun Bisa Dɛ Mbabun
Fa mona Fa mona Ebɛn Kwan Do Na Bible No Botum Aboa Me?​—Ɔfã 1: Hwehwɛ Wo Bible No Mu
ijwyp asɛm 77
Ebɛn Kwan Do Na Bible No Botum Aboa Me?​—Ɔfã 2: Ma Wo Bible Akenkan Nyɛ Enyigye
Bible Adzesua Ho Dwumadzi
NSƐM AFOFOR A MBABUN BISA...
Sunsum Afamu Nkɔenyim
Ebɛnadze Ntsi Na Ɔsɛ Dɛ Mobɔ Mpaa?
Ebɛnadze Ntsi Na Ɔsɛ Dɛ Mokɔ Nhyiamu Ahorow A Wɔyɛ Wɔ Ahendzi Asa Do No?